Alahady 07 Novambra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady faha 7 novambra 2021
Alahady faha 23 manaraka ny Trinite
Fanompoam-pivavahana nandraisana ny Katekomena andiany « MIRAY »
Mpandray ny FANASAN’NY TOMPO
Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « TAFATOETRA NY FON'IZAY MIANDRY NY TOMPO »
« Ary amin’izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy » Matio 13 : 43a
Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatanteraka ny fanompoam-pivavahana.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana sy nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny Hira faneva 160 taonan’ny Fitandremana
Ho fiderana an’Andriamanitra dia niarahana namaky ny Salamo 98 : 1-6. Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 20 : Tsaroanay tokoa izao and. 1, 2, 3. Nasandratra ny vavaka fiderana sy fisaorana ary napetraka teo am-pelantanan’Andriamanitra ny fanatontosana ny fotoana.
«Ary ny Tompo izany Fanahy izany ; ary izay itoeran’ny Fanahin’ny Tompo no itoeran’ny fahafahana.» 2Kor.3 :17 ; «Nefa tandremo, fandrao izany fahafahanareo izany ho tonga fahatafintohinana ho an’ny malemy.» 1 Kor.8 : 9 ; «Aoka hianareo hiteny sy hanao araka izay mahamendrika anareo, izay olona hotsarain’ny lalàn’ny fahafahana.» Jak. 2 :12
Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny hira FF 2 : He ! Manolo-tena and. 1-3.
Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 407 : O! ry Raiko Izay mahalala, and.1-3.
«Tany lavitra any no nisehoan’i Jehovah tamiko ka nanao hoe : Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, Koa izany no nampaharetako ny famindrampoko ho anao. » Jer.31:3 ; « Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona ; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho. » Isa.44:22 ; « Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa.» Rom.8:1
Ho setrin’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FF 7 : Tsy hainay ny hangina, and.1.
Ho fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany. Narahina vavaka mangina izany.
Ny mpampianatra ny K10, Ramino Lalaina, no nanao ny hafatra. Ny Salamo 4:4a no nangalana ny hafatra izay manao hoe «Tezera fa aza manota». Fihetsehampo voajanahary amin’ny olombelona ny fahatezerana. Afaka ny ho tezitra izy nefa
1/ Aza miteny ratsy : loza mitatao satria na ny ankizikely ao an-trano aza, manjary mahay miteny ratsy. Raha tena Kristiana isika tsy miteny ratsy izany mihitsy.
2/ Aza mitahiry lolompo : isika mivavaka isan’andro hoe : « Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay». Ny lolompo dia sady heloka amin’Andriamanitrano manimba ny tena satria mankarary.
Tezera fa aza miteny ratsy. Tezera fa aza mitahiry lolompo. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
Ny hira FFPM 489 : Tena sambatra sy maha te ho tia, and.2 no nanaraka izay hafatra izay.
– 6-12 novambra : hotanterahina eto amin,’ny FJKM Amparibe Famonjena sy ny Katedraly Analakely, ny famaranana ny Iray volan’ny boky ny mpanoratra, velankevitra sy fifanakalozana hataon’ny Mpitandrina maromaro, ary nokarakarain’ny Tranombarotra Antso.
– Avy amin’ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista, Foibe FJKM : 13 novambra, 9 ora sy sasany, FJKM Ambohinambo, Fiofanana ho an’ny SEFALA, SETELA, SEMI, SAMM.
– Fanatitra Rakitra anniversaire volana oktobra
– Nivoaka ny Gazety Taratry ny Famonjena volana novambra
– 8-12 novambra: Herinandrom-bokatry ny GAZETY TARATRY NY FAMONJENA sy ny TRANOKALA
– Asa vavolombelona roa: Fandraisana ny Katekomena MIRAY nanome kapoakam-pandraisana 40, plateau 1 sy Enseigne lumineux eo amin’ny vavahady lehibe andrefana, nifarimbonany tamin’ny K160 Taonan’ny Fiangonana; ary fanokanana izany Tsangambato izany.
– Sabotsy 13 novambra: Fitsangantsanganan’ny Fiangonana, miendrika Garden Party hatao etsy amin’ny Tananan’ny Mompera Androhibe Analamahitsy
– Alahady 14 nov. 3 ora: SAMPATI Fivoriambe, 3 ora
– 15-21 novambra: Herinandrom-bokatry ny SAMPATI
– Talata 9 nov., 2 ora: Fivoriambe Sampana Dorkasy
– Zoma 12 nov. 12 ora sy 15mn: Fivoriana Komity Trano atsimo
– Sabotsy 27 novambra: Hetsika SAFIF noho ny faha 30 taonany
– Alahady 28 novambra: Alahadin’ny Zanaka am-pielezana
– Fe-potoana farany fanaterana Fiche technique Sampana: alahady 7 novambra
– Taratasy fisaorana avy @ SMZM
– Fiantsoana fanambadiana: Rasoamanana Lantotiana sy Andrianaivorajoelina Nantenainarivelo Miantranavalona; fiantsoana faharoa.
– Filazana manjo:
*Manantsoa Hasina Fanilo, 24 taona. Hoy ny RAD, ny iray tampo RAD Razafindravahatra Félix (Fifi) sy Ramaromandray Beby.
*Raharinoa Raharisoa Bodohanta, 70 taona. Hoy ny zanany Rasoloarijao A. Harilaza, Mpitandrina, sy Edith Gabriella vadiny, mianadahy avy.
*Rahanetra Paul, 63 taona. Hoy ny vadiny Razanamasy Florence sy ny zanany
Fanatitra sy Fanomezana
Hira vavaka fanolorana: FFPM 4: Mamy ny fitianao, and.4.
Natao ny hira FFPM 177: Ry Fanahy Mpanazava, and. 1, 4.
Ary taorian’izay ny Vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.
Nentina am-bavaka ny vakiteny mba hahazoan’ny tsirairay mandray tsara ny hafatry ny Tompo.
Famakiana ny Soratra Masina: Salamo 57:1-11; Matio 13:36-43; ary ny Hebreo 9:23-28.
Nanaraka izay ny hira FFPM 312: Mitoera ry Jesosy, and. 1, 2, 4.
Fotoana ametrahana eo am-pelantanan’Andriamanitra ny zanaka nahavita fianarana Katekomena ho tonga mpanara-dia an’i Kristy. Ny « Eklesia » dia midika hoe « nantsoina avy any ivelany mba ho iray ao amin’ny Tompo. »
Paoly dia mampiseho fa amin’ny maha olon’afaka ny Kristiana dia tokony mitoetra tsara ao amin’ny Tompo. Mila mitandrina isika fa efa nahafahana. Afaka ny Kristiana nefa afaka tsy araka ny nofo fa araka ny Fanahy. Mila hajanona ny raharaha sy ny lafiny ara-nofo eo amin’ny fiainantsika.
Adama sy Eva dia lavo ka voaroaka tao amin’ny saha Edena satria teo ambany fanapahan’i satana ka tsy maintsy nanao asa famonjena i Kristy. Ny famonjen’i Jesoa Kristy dia fanafahana ny olona ho any amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Ny olon’Andriamanitratra no afaka miaina sy misitraka ny fahafahana nataon’Andriamanitra. Tany Galatia dia nisy ny olona mivadibadika sady Kristiana nandeha araka ny nofo. Afaka tsy mpanompon’ny nofo intsony isika. Noana ny vatana mivezivezy ny fanahy. Rehefa misy ny filan’ny nofo dia miteraka olana amin’ny olona.
Ny kristiana dia manana fiainana vaovao. Tsy andevon’ny ota intsony ny olon’afaka. Paoly dia maniry ny hanao tsara kanefa misisika ny ratsy. Ento amin’ny fahafahana ao amin’ny Tompo ny fahafahanao.
Isika Mpino tsy tokony ambakan’ny olona any ivelany. Afaka tsy eo ambanin’ny lalàna isika. Tsy mahafaka ny lalàna fa arofanina fotsiny. Tsy afaka miaro antsika ny lalàna. Na dia eritreritra ratsy aza dia mandiso antsika eo anatrehan’ny lalàna.
Rehefa raisintsika ny famonjen’i Kristy dia tonga olon’afaka isika. Ny finoana ny famonjen’i Kristy dia manafaka antsika. Tehirizo tsara ny famonjen’i Kristy anao aza avela ho votsotra. Raha avy nividy tapakila fijerena fampisehoana ny olona iray ka very ny tapakila dia tsy afaka mijery izany intsony. Tehirizo tsara ny tapakilanao hahafahana miditra ny fanjakan’ny lanitra.
Amafiso ny fanekentsika. Aza mangataka andro fa tsy tompon’ny ampitso isika. Aza miandry fiantsoana manokana fa ny manodidina anao miresaka aminao no miantso anao. Ho an’ny ankizy dia omany dia ny izao ny firosoana ho mpianatra Katekomena.
Afaka ianao araka ny Fanahy. Ny Kristiana dia mila mifankazatra amin’ny Tompo. Mazotoa mihaino toriteny. Miaina amin’ny fahafahana tanteraka ny olon’afaka, miaina ny fitarihan’ny Fanahy Masina izy ary miasa eo ambany fahasoavan’Andriamanitra. Miantso foana ny Tompo fa misy tsy mahare ; misy mijery fa tsy mahita, fa isika sady mahare no mahita. Fanatitra tsy miverina indroa na intelo ny asa famonjen’i Kristy. Izao ny Fiangonana no miantso anao. Mivavaha ho anay mpanota, hoy ny sasany, mahita antsika mandeha mivavaka. Maninona izy ireny no tsy mandeha mivavaka raha mahatsapa fa mpanota mila vavaka. Tsy mijery ny endrika ivelany ny Tompo. Izay miandry ny Tompo dia mivoaka ho mpandresy amin’ny fitahiana mahatretrika. Nantsoina ho amin’ny fahafahana isika hiaraka miombom-bavaka sy hiaraka hiaina ny Tenin’Andriamanitra. Afaka amin’ny Fanahy ianao. Mitoetra tsara ny fonao satria ao amin’i Kristy ny fiainanao. Ny asa fanompoanao dia natao hampandrosoana ny asan’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny Katekomena andiany Miray ny Mpitandrina ary ho an’ny Fiangonana manontolo; ho an’ireo nangata-bavaka sy nisaotra an’Andriamanitra. Izany dia nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, Rainay ô Izay any an-danitra.
Taorian’ny vavaka fangatahana dia nanao ny anjara hirany ny Antoko mpihira Hasin’ny Famonjena : Midera an’i Jehovah.
Roa loha ny Asa vavolombelona :
1-Fandraisana ireo Katekomena andiany MIRAY ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo.
Nanao ny Fanekena iombonana : Manaiky marina aho… sy ny Faneken’ ny tsirairay izy ireo. Avy eo ny hira FFPM 295: Miorena mafy tsara and.1-2, no nataon’ny Mpandray rehetra ; ny andininy faha 4 nataon’ny Mpandray vaovao ; ary ny andininy faha 3
nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana.
Narahina vavaka izany. Ny Katekomena « Miray » avy eo no nanao ny hirany :
« Tena sarobidy loatra » noforonon-dRajaofetra John.
Taorian’ny fandraisana ireo Mpandray ny Fanasan’ny Tompo vaovao dia nohiraina ny FFPM 428: Reko izao ry Tompo, and.1-2.
2-Fitokanana ny vavahady lehibe andrefana, nasiana Enseigne lumineux, asa nifandrombonan’ny Komitin’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ny Katekomena Miray.
Novakiana ny Tondrozotra 2021.
Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Natao ny hira FFPM 617 : Aza manadino ahy, and.1.
Taorian’ny Fanompoam-pivavahana dia nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo niarahana tamin’ireo Mpiray latabatra vaovao amin’ny Tompo. Ireto avy ny hira natao :
FF 30 : Fo mitambatra, 2
Antema 1 : Masina, Masina, Masina
FF 8 : Masoko manganohano, 3
FFPM 254 : Avia ry mangetaheta ô
FFPM 107 : Maniry mafy aho
Taorian’ny Hafatra sy ny Tsodrano, ny hira FFPM 335 : Hody ‘zahay Zanahary1 sy 2.
IREO TOMPON’ANJARA : :
Nitarika ny fotoana : Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
Vakiteny : Ramatoa RAHARIJAONA Bodoharisoa
Niandraikitra ny fafana : RAKOTONARIVO Vatsy
Mpitendry Orga : IRIMANANA Eninkaja